केन्या म Tuesday्गलबार January जनवरी २०० 8: सुरक्षा अपडेट pp.m.
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » केन्या म Tuesday्गलबार January जनवरी २०० 8: सुरक्षा अपडेट pp.m.
दिनभर नैरोबीमा स्थिति सामान्य सामान्य थियो, सार्वजनिक यातायात संचालनको साथ र सबै कार्यालयहरू र बैंकहरू सामान्य रूपमा खुल्ला थिए।
त्यहाँ कुनै यातायात सवारी सवारीका लागि कुनै समस्या भएन जुन शहर हुँदै जान्छ र सबै स्थानान्तरणहरू एयरपोर्टबाट र नैरोबी होटेलहरूमा सामान्य रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
सहरमा कतै पनि पर्यटकहरूलाई असर गरेको कुनै रिपोर्टहरू भेटिएन।
फेरि सबै सामान्यमा फर्कियो र कुनै समुद्री तट रिसोर्ट वा मोम्बासामा पर्यटकहरूलाई असर गर्ने कुनै रिपोर्ट आएको थिएन। सबै ट्रान्सफर र सफारीहरू मोम्बासाबाट सामान्य को रूपमा कार्य गर्न जारी राख्छन्। मोम्बासा दक्षिण तटमा रहेको बेलायती कन्सुलर प्रतिनिधिले तटवर्ती पर्यटकहरुका लागि राम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि विगत केही दिनदेखि पर्यटक पुलिस इकाईको कामको कदर गरेको कुरा लेखेका छन्।
पार्क र आरक्षण
पार्क, भण्डार वा पर्यटक मार्गहरूमा जहाँसुकै समस्याको रिपोर्ट आएको छैन। सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू र भण्डारहरू सामान्य रूपमा सडक वा वायु द्वारा भ्रमण गर्न सकिन्छ। दैनिक पार्कहरू सबै पार्कहरू जोड्ने सेवाहरू सामान्य रूपमा कार्य गर्न जारी राख्दछन्।
पश्चिमी केन्यामा आज फेरि कुनै समस्याको रिपोर्ट आएको छैन। यद्यपि हामी सिफारिस गर्न जारी राख्छौं कि एल्दोरेट, केरिको, काकामेगा र किसुमु वरपरका क्षेत्रहरू पर्यटकहरूको लागि केही समयको लागि सीमित रहनु पर्छ। यद्यपि यी पर्यटनहरू सायद उनीहरूको सफारी यात्राको एक भागको रूपमा भ्रमण गर्दछन्। केन्या एयरवेजले किसुमुका लागि निर्धारित उडानहरू सञ्चालन गर्न जारी राखेको छ र विगत केही दिनहरूमा इल्डोरेटमा धेरै तदर्थ उडानहरू पनि सञ्चालन गरेको छ।
गत २ h घण्टाको अवधिमा जर्मन सुरक्षा सल्लाहकारलाई हटाइएको छ र अन्य मुलुकले आफ्नो यात्रा सल्लाहकारमा छिटो संशोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने शान्ति पुनर्स्थापित भएको तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।